Hojiin Siviilootaa fi Ripxe Loltoota Aleeppoodha Baasuu Guyyaa Tokkoo Dhabbatee Ture Harra Marsaa Dhumaatii Jalqabamee Jira
Siiviilonnii fi ripxe loltoonni Syria magaalaa Aleppo gama kaabaa keessaa ba’uun guyyaa tokkoof erga boodatti harkifatee booda itti fufee jira. Atoobisiin namoota fe’atee Aleppo gama dhyaa keessaa ba’aa jiraachuu angawaan TM kan Syria keessaa Reutersf ibsaniiru.
Britin keessa kan maadheffate qareen mirga namaa siiriyaa keessaa qoratu akka jedhetti atoobisiin 60 ta’u qilleensa hedduu qabbanaa’u kan Aleppoo keessaa baasuuf qophaa’anii jiran. Magaalattiin waggoota afur dura ripxe loltootaan qabamte.
Namoonni gamasii ba’anii ennaa xumuran president Bashar Al assad Aleppo guutummaan akka to’atan taasisa.
Uummati gamas dhiisanii ba’uun akka walii galtee Rashiyaa fi Turkey-n tolfametti ta’a. uummati kuma 37 ta’u Aleppo dhiisanii ba’uu muummichi ministeeraa Turkii Mevlut Cavu-so-gul beeksisaniiru. Wal waraansa geggeessameen biilsaaleen Aleppo gama dhiyaa dhibba irraa harki 70 ol barbadaa’aniiru.